आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर, हेर्नुहोस? – दैनिक नेपाल न्युज
आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर, हेर्नुहोस?
काठमाडौं । आज साताको पहिलो दिन अमेरिकी डलरसहित प्राय सबै देशको मुल्य ओरालो लागेको छ । नेपाल राष्ट्रबैकंले आजका लागी तोकेको विदेशी मुदको विनिमय दर अनुसार आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर ११३ रुपैयाँ १२ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ११३ रुपैयाँ ७२ पैसा रहेको छ। त्यस्तै साउदी रियाल एकको खरिददर ३० रुपैयाँ १६ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३० रुपैयाँ ३२ पैसा रहेको छ।
युएई दिराम एकको खरिददर ३० रुपैयाँ ८० पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३० रुपैयाँ ९६ पैसा रहेको छ । त्यस्तै कुवेती दिनार एकको खरिददर ३ सय ७२ रुपैयाँ ४० पैसा तथा बिक्रिदर ३ सय ७४ रुपैयाँ ३७ पैसा रहेको छ। बहराईन दिनार एकको खरिददर एकको खरिददर ३ सय रुपैयाँ ४ पैसा तथा बिक्रिदर ३ सय १ रुपैयाँ ६३ पैसा रहेको छ।
त्यस्तै युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १४५ रुपैयाँ र बिक्रिदर १४५ रुपैयाँ ७७ पैसा रहेको छ। त्यस्तै कतारी रियाल एकको खरिददर ३० रुपैयाँ ६ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३० रुपैयाँ २३ पैसा रहेको छ। मलेसियन रिँगिट एकको खरिददर २७ रुपैयाँ २ पैसा तथा बिक्रिदर २७ रुपैयाँ १७ पैसा रहेको छ।